Hadraawi iyo Saleebaan Gaal waa isku Reer waase kala Raad | Burco Media
Hadraawi iyo Saleebaan Gaal waa isku Reer waase kala Raad
Ayaan aan fogayn ayaa warbaahinta Somaliland waxa lagu arkay warar naxdin leh kuwaas oo ka waramay caafimaadarada la soo saristay Abwaa Hadraawi. Ayaamo yar ka dib ayaa TVyada Somaliga mid ka mid ah ayaa sawir maqal iyo muuqaal ah ka soo qaaday Abwaanka oo ka waramaya xaaladiisa caafimaad. Wuxu hadalkiisa ku bilaabay; Dadwaynaha waxan jeclay inaan u sheego in xaaladayda caafimaad ay aad u wanaagsantahay, waxa laygu sameeyay baadhitaano badan, wax cilad ah oo layga helayna ma jito. Wuxu intaa ku daray; ‘ naftu waa ammaano, geerina waa ina wada sugaysaa.
Mudadan xanuunku i hayay waxan yareeyay socodkii, waxan aad u badiyay cibaadadii iyo Alle ka cabsigii. Akhtistow, hadalkaa u Hadraawi yidhi waa mid ku dayasho leh, waana intuu odhan lahaa ruux garanaya waynaanta Eebe iyo qiime yaraanta aduunyo. Bal hadaba aynu eegno inta Illaah waafajiyay Hadraawi in Saleebaana garto. Fursadii caafimaad ee u helay, kadib markii caafimaad daro wayni la soo daristay muddana u sariirta yaalay,waxa u u tafo xaytay sidii u gudan lahaa waajibaadka reerka. Saleebaan tiraba saddex jeer ayuu ka soo ruqaansaday sariirtii u ku jiifay oo taalay cusbataal ku yaal dalka Ingiriiska, Saleebaan kama faa’iidaysan nabarka laga gooyay, umana kicin halkaa iyo Maka iyo xaramkii, waxaanu ka soo dagay magaalada Hargaysa, si uu u garab istaago madaxwaynaha ay isku beesha yihiin.
Waxa u si badheedha oo qabyaaladi ay ku dheehan tahay, sharcigana ka fug ula saftay Siiraanyo. Isaga oo ah gudoomiyihii Guurtida, waxa u gaashaanka ku duftay in u dhagaysto cabashooyinka shacabka ee ku aadanaa dooroshooyinka waxanu yidhi; ‘Waar anaba waa nala dhici jiray, cabashooyinkana waa la yaqaanaa oo saddex, afar cisho ayay ku dhamaanayaan’ miyaanu taa macneheedu ahay anaga oo reer hebal ah ayaa nala dhacay doorashadii 2003 ee anana waa dhacaynaa markayaga e adkaysta. Maalinta labaad ee uu sariirta ka soo toosayna waxa kaliya ee uu yidhi; ‘waxan dadka farayaa in dowlada loo hogaansanaado.
Maalinta saddexaadna waa maalintii loogu yeedhay inuu Madasha af labadiisa daan ku cambaareeyo–hada ka saas u hadlayaa laga soo bilaabo dhalashadii Somaliland ilaa iyo intuu Siiraanyo ka qabsanayay shaqo aan ahayn shir beeleed iyo mucaaridad sharciga ka baxsan laguma aqoon. Hadaba miyaanay cadayn in Saleebaan ducaystay mudadii u sariirta ku ildarnaa, oo aanu odhan Illaahaw ha i dilin anoon reerka gar iyo gardaraba ku difaacin oo aan xilka reerka gudan, dabeeto markii u Hargaysa yimi ee u falay wixii u falay, miyaanu odhan ‘Alla mar baan dhiman gaadhay anoon waajibaadkii reerka gudan.
Hadal iyo dhamaantii waxaan loola yaabayn; waa ninkii Mohamed Siyaad Barre oo qabyaaladiisa laga yaabay ayaa kasii yaabay waxaanu ugu yeedhi jiray Saleebaan Ha—j—lo.